कहाँ छिन नायीका मौशमी मल्ल ? बर्षौ पछि यस्ती भएर मिडियामा आइन् (भिडियो हेर्नुस्) – Khabaarpati
January 8, 2021 goodmamLeaveaComment on कहाँ छिन नायीका मौशमी मल्ल ? बर्षौ पछि यस्ती भएर मिडियामा आइन् (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । कुनै जमानाकी चर्चित नायीका मौशमी मल्ल अहिले फिल्म क्षेत्रवाट वाहिर छन् । उनी चितवनमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएकी छन् । १५ वर्षको उमेर देखि उनी चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् । तर अहिले भने उनी चलचित्र देखि केही टाढा छन् । तर पनि त्यो फिल्म क्षेत्रलाई भने उनी सम्झिरहन्छिन् ।
उनले आफुले चलचित्रमा काम गर्दा भोगेका अनुभव र समस्याहरुका बारेमा कुराकानी गरेकी छन् । निकै राम्रो अभिनय र नृत्यका लागि मौशमी निकै चर्चित थिइन् । अहिले पनि उनी चलचित्रमा सकृय नै छन् तर पहिलाको जस्तो ब्यस्त भने छैनन् ।
एक वर्षमा एक दुईवटा मात्र काम गरेको बताउने मौशमी आफुलाई धेरै अफर आएपनि गर्न नभ्याएको बताएकी छन् । आमा प्रति मेरो धेरै जिम्मेवारी छ, त्यही भएर फिल्ममा धेरै समय दिन नसकेको हो । आमा अस्वस्थ्य हुनुहुन्छ ।
उनले भाग्यरेखावाट नायीकाको रुपमा डेब्यु गरेकी थिइन् । आफुले त्यो भन्दा पहिला पनि केही सामान्य काम गरेको बताएकी छन् । सानै उमेरमा विवाह गरेकी मौशमी फिल्मको काम गर्दा नै गर्भवती भएको समेत थाहा नपाएर कठिन काम गरेको बताएकी छन् । पोखरामा हुँदा सामान्य बुहारीले जस्तै घरमा दैलो पोतेर फिल्मको काममा गएको स्मरण पनि गरेकी छन् ।
उनले आफु काममा निकै अनुशासित भएका कारण आफुलाई धेरै कामको अफर आउने गरेको पनि बताएकी छन् । आफुले त्यतीबेला नाच्ने काम र फिल्मको कामलाई संगसंगै लिएको गएको बताइन् ।
उमेरले सानो थिए तर ब्यवहारले परिपक्क भएको थिए । विवाह भएर दुई नानी भइसकेपछि म फिल्ममा लागेकी थिए त्यसैले परिपक्क थिए उनले सम्झना गर्दै भनिन् ।
टिक-टकमा सबैलाई हसाउने भाइरल जोडी मिडि यामा, स्वास्नी पि, डित भन्दै हसा, उनु हँसाए (हेर्नुस भिडियो सहित)
April 19, 2021 goodmam
सु,तेकै ठाउमा टिप,रले थि,चेर ज्यान गुमाएका श्रीमान श्रीमतीका छिमेकिले खुलाए तेस स्थानमा पहिला पनि के के हुन्थ्यो (भिडियो सहित)